“Efa lera” : hitondra endri-tseho vaovao ny TGC | NewsMada
Fotoana ifanomezana isan-taona, saingy hiavaka kosa ny amin’ity. “Efa lera” ho an’ny Tana Gospel Choir sy ireo mpanaraka azy ireo ny fihaonana.
“Hody any amin-draiko”. Hira vaovao izay vao nahavitan’ny Tana Gospel Choir rakikira ihany koa io. Azo hitarafana ny vokatra vaovao sy ny endri-tseho kasain’ny TGC hozaraina ato ho ato, izany. Ao ny fivoarana sy ny fivelarana amin’ny mozika, saingy heno sy tsapa tsara ilay fototra maha malagasy ao anatin’ny sanganasa.
Izay endrika izay indrindra no hasongadin’ny TGC anatin’ilay fampisehoana izay hotontosain’izy ireo, ny alahady 1 jolay ho avy izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
“Hitondra anao hitety an’i Madagasikara, amin’ny alalan’ny hakanton’ireo foko 18”, hoy ny fanazavana anatin’ny pejy Facebook an’ny tarika. Ankoatra ny lafiny fiderana sy ny fitoriana ny Filazantsara, anisan’ny misongadina anatin’ny endri-tseho koa izay fanehoana ny haren’ny kolontsaina malagasy izay. Tsy amin’ny alalan’ny gadon-kira ihany, fa amin’ny endrika sy ny fitafy ihany koa.
Fotoan-dehibe ho an’ny TGC sy ny mpankafy io seho io, ka ezahin’ny Ivenco, izay nandray an-tanana ny fikarakarana ny haha matihanina azy. Tsy fitadiavam-bola anefa, fa valopy fandraisana anjara no handrasana amin’ireo mpijery izay hankafy ny seho. Hatao hanampiana ny La Maison d’Aïna, ivo-toerana misahana ny fitaizana sy ny fanabeazana ireo ankizy sahirana any Ambatolampy izay voaangona amin’izany.